Inceku ihlulwe wumona ngoBeekay
MHLELI: Kwelakho eliyaye likhombise ukungachemi nelifundwa ngabantu abaningi ngenxa yolimi olunothile, ngiyacela ukuba ungiphe isikhandlana ngikhulise uzakwethu uMbhishobhi Themba Chonco ngakubhalile kwelakho lapho ethe khona “Alubhekisiswe uhlelo lukaBeekay.’’ Kuyiqiniso ukuthi inkomo iyalushayelwa ubisi lwayo.
Emva kokufunda udaba olubhalwe nguGambushe nokuwumbono wakhe, yebo kuleli lizwe sinelungelo lokubeka imibono yethu kodwa ayingadumazi-ke abanye. Uyabona lo mbono kaGambushe uyangidumaza ngoba uphuma kwinceku ezwakala ihlulwa wumona yaze yawukhiphela ngaphandle.
Mhlawumbe Gambushe kuzofanele wazi ukuthi uhlelo lukaBeekay Mchunu (osesithombeni) akazisuseli yena ekhanda kepha usuke enikwe indlela ewumhlahlandlela eyinikwa umphathizinhlelo. Uyabona umphathizinhlelo wayizama le ndlela yokufaka uDr Mahaye ekutheni asibuyisele esintwini nebala kwenzeka ngempela njengoba abalaleli balwamukela ngesasasa uhlelo lukaMchunu.
Okunye okumele ukwazi Gambushe wukuthi lolu hlelo luwuhlelo olulalelwa kakhulu ekubeni lungena ngeSabatha kanye nje vo futhi lulele isithathu ezinhlelweni zoKhozi FM ngokulalelwa.
Angithandi ingane yomuntu siyidlele umona nceku ngemisebenzi yayo emihle, empeleni njengoba mina nawe sizinceku simelwe ukuhalalisa imisebenzi emihle eyenziwayo.
Angifuni ukuthi uMchunu asizwe kabi singabalaleli bakhe ngoba izinkomba zithi mina nawe siyamlalela okusho ukuthi uyasinika lokhu esikudingayo.
Kumele engabe abalandeli bamaNazaretha bayakhala ngokuthi banikwa usuku olulodwa okuyaye kube yiSabatha ekubeni ezinye izinkolo zinikwa inkonzo yangesonto, kunokuba bakhale bayamemana.
Sengiphetha uboke uvakashe eBuhleni uyolunguza ukuthi amasiko esintu kawekho yini kuleli bandla.
Uma uphika Gambushe uthi iNazareth Baptist Church akusilo isonto eliphethe isintu, lilethe lelo phambili ukuze uBeekay alicubungule.
Khabzela “KB” Mzimela